Wafdi maraykanka ka socda oo maanta Hargaysa | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Wafdi maraykanka ka socda oo maanta Hargaysa
Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta gaaray Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka oo ka yimid waddanka Jabuuti.
Wafdigaan oo diyaarad Millateri ay keentay Garoonka diyaaraha Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa Wararka qaar ee la helayo waxay sheegayaan inuu hoggaaminayo taliyaha ciidamada Maraykanka ee saldhiggoodu yahay Jabbuuti & ayna qeyb ka yihiin Diblomaasiyiin kale oo Maraykan ah.
Wafdiga ka socda Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka waxay la kulmayaan Mas’uuliyiinta Sare ee Soomaaliland, iyagoo kala hadli doona arrimo dhowr ah.
Sidoo kale Wararka la helayo ayaa sheegaya in Wafdiga ay booqan doonaan Dekadda magaalada Berbera oo ay gacanta ku heeyso Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka imaaraadka.
Booqashadaan ay Maanta ku tageen Magaalada Hargeysa Wafdiga ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa timid kadib markii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu booqasho ku tegay Mareykanka, isagoo wada-hadallo la yeeshay Madax ka tirsan dowladda Mareykanka.
Previous articleDHAGEYSO:Siyaasiyiinta oo lagu boorriyay inaynan bulshada kala qaybin
Next articleDHAGEYSO:Waalid canuggiisa uga dhex tagay dugsi aan u soo bixin